स्थानीय निर्वाचन « News of Nepal
शङ्करापुरको सातवटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक
काठमाडौँ, ३ जेठ । काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकाको सातवटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । शङ्करापुर– १, २ र ५ मा नेकपा (एमाले), वडा नं– ३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र), वडा
नौकुण्डमा काँग्रेस विजयी
रसुवा, ३ जेठ । नौकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका नुर्पु साङ्वो दुई हजार ३०१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकप (एमाले)का म्लाङदुङ मोक्तानले एक हजार
काठमाडौँ महानगर– १ मा एमाले विजयी
काठमाडौँ, ३ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिका– १ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ एक हजार ३५ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका भोला थापाले ६३९
काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी
धुलिखेल, ३ जेठ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका प्रेम तिमल्सिनाले ३८६८मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका प्रेम लामाले २७४१ मत प्राप्त
भद्रपुर, ३ जेठ । जिल्लामा ३१ वटा दल दर्ता भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार दर्ता भएका दलहरुमा मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक), नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय
पञ्चकन्या–३ मा मतगणना रोकियो
नुवाकोट, ३ जेठ । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–३ मा मतगणनामा १८ मत बढी देखिएपछि दलहरुबीचको विवादले गणना रोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार वडा नं– ३ मा रहेको एकमात्र
पर्वतको पैंयूँ गाउँपालिकामा काँग्रेसका तिवारी विजयी
फलेवास (पर्वत), ३ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत दक्षिण पर्वतको पैंयूँ गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस नेता खगेन्द्र तिवारी अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ । हिजो रातिअबेर सम्पन्न मतगणनामा नेपाली काँग्रेसका खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले
बागलुङ निसीखोलामा काँग्रेस विजयी
बागलुङ, ३ जेठ । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । दुई हजार ९३७ मत प्राप्त गर्दै नेपाली काँग्रेसका तारानाथ पौडेल गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँका
चितवन, ३ जेठ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा (एमाले) का देवीप्रसाद ज्ञवालीको अग्रता कायमै रहेको छ । उहाँले दुई हजार ७४९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रकी रेणु
वाग्मती गाउँपालिकामा काँग्रेसको अग्रता
ललितपुर, ३ जेठ । वाग्मती गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ मा नेपाली काँग्रेसका वडा अध्यक्ष समूहसहित विजयी हुनुभएको छ । वडा नम्बर ३ मा विष्णुप्रसाद तिमलिल्सनाले ६२४ मत ल्याई
नौकुण्ड गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा एमाले विजयी
नेपाल समाचारपत्र, रसुवा । रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा एमाले विजयी भएको छ । प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका नुर्पु साङ्वो घले २३०१ मतका साथ विजयी हुनुभएको हो । उपप्रमुखमा
मध्यपुर थिमि वडा नं. २ मा काँग्रेस विजयी
पुष्कर बुढाथाकी, भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका वडा नं. २ को अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार राम थापा मगरको टोली विजयी भएको छ । थापा मगरले ८३२ मत ल्याई अध्यक्षमा विजयी हुनु
सल्यानमा ५० वडाको नतिजा सार्वजनिक
सरिता चलाउने, सल्यान । माआवादी केन्द्रले जितेका वडाहरु १ कपुरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ मा वालाराम खड्काको नेतृत्वमा पुरै टिम, २ ढोरचौर गाउँ पालिका १ मा राम बहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा
सल्यानमा तीन गाउँपालिका र ५३ वडाकोे नतिजा सार्वजनिक
सल्यान, ३ जेठ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज बिहानसम्म तीन गाउँपालिका र ५३ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त मतपरिणाम अनुसार दार्मा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा (नेकपा माओवादी केन्द्र)का निमबहादुर केसी र
रुकुममा चार स्थानीय तहमा माओबादी केन्द्र बिजयी
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाँउपालिका र सानीभेरी गाँउपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र बिजयी भएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका देबिलाल गौतम बिजयी भएका
काभ्रेका दुई गाउँपालिकामा मतगणना सकियो
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । काभ्रेका दुई गाउपालिकाको मतगणना सकिएको छ । जिल्लाको विकट गाविस खानीखोला गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित चार वडा अध्यक्ष विजयी भए भने बेथाञ्चोक गाउँपालिकामा नेपाली
कालिका गाउँपालिकामा एमाले विजयी
नेपाल समाचारपत्र, रसुवा । रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले विजयी भएको छ । प्रमुखमा सिता कुमारी पौडेल १४५८ मतका साथ विजयी हुनुभएको हो । उपप्रमुखमा भवानी प्रसाद न्यौपानेले
दोलखाको जिरी नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख सहित ६ वडामा एमालेको जित
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । दोलखाको जिरी नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । नगरप्रमुखमा नेकपा एमालेका टंक जिरेलले ३२१२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन । उनको
लमजुङको मध्यनेपाल प्रमुखमा काँग्रेसका पाण्डे, उपप्रमुखमा एमालेका श्रेष्ठ निर्वाचित
बँेसीसहर (लमजुङ), ३ जेठ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका रमेशकुमार पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मोहनहरि पौडेललाई एक हजार ४२१ मतले पछि पार्दै पाँच हजार
बागलुङ जिल्लाका हालसम्मका विजयी उमेदवारहरु
सिर्जना पन्त, बागलुङ । आइतबार भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनको मतगडना चलिरहदा बागलुङ बागलुङ जिल्लाकै ठुलो मानिएको बागलुङ नगरपालिकाका १,३,४ र ५ नम्बर वडामा नेकपा एमालेको प्यानलनै विजयी भएको छ ।